Xarun Lagu Tababaro Ciyaaryahanada England Kuna Baxday £105 million Oo Xariga Laga Jaray - jornalizem
Xarun Lagu Tababaro Ciyaaryahanada England Kuna Baxday £105 million Oo Xariga Laga Jaray
Xarun ay ku baxday lacag faro badan ayaa waxaa si rasmi ah u furay amiirka iyo amiirada Cambridge iyadoo qorshaha uu yahay in la keeno koobka adduunka sanadka 2014ka.
Amiirka iyo xaaskiisa ayaa si rasmi ah u furay £105 million xarunta ku baxday ee loogu magac daray St George’s Park taasoo muddo ka badan toban sano la qorsheynayay.
Ujeedada xaruntan loo dhisey ayaa lagu sheegay inay tahay sidii ay u soo saari lahayd tababarayaal khibrad leh iyo ciyaaryahano wanaagsan inay ka soo baxaan dalka England isla markaana ku guuleysan kara koobab waaweyn.
Amiirka oo ah Madaxweynaha xiriirka kubbada cagta England ayaa yiri:”Inaan halkan imaado oo aan arko qalabkan la yaabka leh ayaa waxa ay I siineysaa dareen la mid ah tii Olympic Park.
“Waxa ay I siineysaa inaan si aad ah ugu hanweynaado inaan halkan ku abuurnay goob qalabaysan oo aan meel loola barbardhigi karo aysan jirin.
“St George’s Park waa fikir cusub, waxayna siin doontaa qalab heer sare ah xulka qarankeena iyo wax ka badan jaamacad ay boqolaal tababarayaal ay ka soo qalinjebiyaan.
Guud ahaan 24ka ciyaaryahan ee xulka qaranka ayaa waxa ay isticmaali doonaan xaruntan meel ay ku tababartaan kahor ciyaaraha isreebreebka adduunka waxana ay ciyaartoyda England ay ku qaateen maanta tababarka xaruntan iyagoo ay goobjoog ka ahaayeen amiirka iyo xaaskiisa.
Ashley Cole oo kamid ah ciyaaryahanada ku sugnaa xaruntan tababarka ayaa gacan qaaday madaxa xiriirka kubbada cagta Ingiriiska ee FAga isagoo dhowaan wax ka sheegay xiriirka kubbada cagta oo ganaax ku soo rogay John Terry isla markaana canaantay Cole.